ICanLocalize: Zvakachipa Shandura Yako Bhizinesi Saiti Kuti Usvike Vateereri Vatsva | Martech Zone
Chitatu, December 23, 2020 Chitatu, December 23, 2020 Douglas Karr
Sangano rangu riri kushanda richibatsira kambani ine chekuita nezvehutano inotaura mitauro miviri kuvaka saiti yavo, kuigadzirisa pakutsvaga, uye kugadzira kushambadzira kwekushambadzira kune vatengi vavo. Ipo ivo vaine yakanaka WordPress saiti, vanhu vakaivaka vaitsamira pane shanduro yemuchina kune vashanyi vaitaura Spanish. Pane matambudziko matatu neshanduro yemasaiti saiti, asi:
Mutauro - Shanduro yemuchina yeSpanish haina kufunga nezveMexico mutauro yevashanyi vayo.
Terminology - Iyo dudziro yemuchina haina kukwanisa kutora chaiyo yekurapa terminology.
Chimiro - Shanduro idzi, nepo dzaive dzakanaka, dzaisangoita hurukuro muchimiro… chinodikanwa kana uchitaura nevateereri vevatengi ava.
Kuti tiwane zvese izvi zvitatu, taifanirwa kupfuura zvinoshandurwa nemuchina uye nekuhaya basa rekushandura panzvimbo iyi.
WordPress WPML Dudziro Services
ne WPML's yakawanda mitauro plugin uye dingindira rakakura reWordPress (Salient) inoitsigira, isu takakwanisa kugadzira uye kutsikisa saiti zviri nyore uye tobva taisa WPML's Dudziro Services kuti tishandure zvizere saiti zvinokwanisika uchishandisa ICanLocalize's mabasa akabatanidzwa ekushandura.
ICanLocalize Yakabatanidzwa Shanduro Dudziro
ICanLocalize inopa sevhisi inosanganisirwa inokurumidza, yehunyanzvi, uye inodhura. Ivo vanopa vanopfuura zviuru zviviri vanozivikanwa, vashanduri veko vanoshanda mumitauro inodarika makumi mana nemashanu. Iwo mareti akaderera zvakanyanya kupfuura echinyakare mamiririri ayo anongogamuchira makuru mabhizinesi kana anoda chero mhando remaoko account setup.
Uchishandisa iyo WPML Dudziro Dhibhodhi rakabatanidzwa neICanLocalize, unogona kusarudza zvinhu zvekushandura wozviwedzera padengu rekushandura. Izwi rekuti kuverenga uye mutengo zvinobva zvaverengerwa uye kubhadhariswa kukadhi rako rechikwereti mune yako ICanLocalize account. Shanduro idzi dzinomiswa mumutsara uye dzinoburitswa zvega mukati mewebsite yako.
Kunze kwemasaiti eWordPress akavakwa neWPML, ICanLocalize inogona zvakare kududzira hofisi zvinyorwa, mafaera ePDF, software, nharembozha, uye zvinyorwa zvipfupi.
Saina Up kune ICanLocalize
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yangu yakabatana link ye ICanLocalize.
Tags: shanduro inodhuraincanlocalizeshanduro yakabatanidzwashanduromabasa ekushandurawordpress mitauro yakawandaWordpress pluginshanduro yeshokosevhisi yekushandura sevhisiwpml